Piece စကားလုံးဆိုင်ရာ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းများ
A showcase piece by Iranian sculptor Sahand Hesamiyan at the Third Line Gallery in Dubai, UAE.
ဒီသတင်းပတ် English Learning: American Idioms and Expressions ကဏ္ဍမှာ Piece (အစိတ်အပိုင်း၊ ပစ္စည်းတခု) လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ Museum piece, Giveapiece of your mind နဲ့ All in one piece စတဲ့ အီဒီယံအသုံးအနှုန်းတွေကို တင်ပြထားပါတယ်။
(၁) Museum piece
Museum (ပြတိုက်)၊ piece (ပစ္စည်းတခု) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က ပြတိုက်က ပစ္စည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးက ၁၉၀၀ ခုနှစ်များက ခေတ်စားလာပြီး၊ ပထမပိုင်းကတော့ ပြတိုက်မှာ ထားရလောက်အောင် တန်းဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်း၊ ရှေးဟောင်းကျတဲ့ပစ္စည်းတခုကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်၊ နောက်ပိုင်းခေတ်တွေကျတော့၊ ရှေးဆန်လွန်းတာ၊ ခေတ်နဲ့မည်ီတော့တာ၊ သိပ်ကိုခေတ်နောက်ကျနေတဲ့ ပစ္စည်း ဒါမှမဟုတ်လူဆိုရင်လည်း သိပ်ကိုဟိုင်းနေတာ၊ သိပ်ရှေးကျတာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဟာသနှော၊ နှိမ်ပြောတာမျိုးမှာ သုံးလေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက် အဓိပ္ပါယ်ကတော့ လူဆိုရင်သိပ်ခေတ်နောက်ကျနေတာ၊ သိပ်ရှေးဆန်တာ၊ ပစ္စည်းဆိုရင်လဲ အခုခေတ်စကားအရ model သိပ်အောက်နေတာမျိုး၊ မြန်မာဘန်းစကားမှာတော့ နိုင်တီး ဂွမ်တီး ဆိုပြီးပြောတာမျိုး၊ နှစ်ချို့နေတာ၊ ဘိုးတော်ဘုရားခေတ်က လို့ တင်စားပြောတာမျိုးနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
The car you have isamuseum piece ! You should just send it to the car junkyard.
ခင်ဗျား ကားက ဘိုးတော်ဘုရားလက်ထက်က ကားကျနေတာဘဲ။ ကားသင်္ချိုင်းကိုပဲ ပို့လိုက်ပါတော့ဗျာ။
(၂) Giveapiece of your mind
Give (ပေးတာ)၊a(တခု)၊ piece (အပိုင်းတပိုင်း)၊ of your (သင့်ရဲ့ )၊ mind (ဦးနှောက်ထဲ၊ စိတ်ထဲရှိတာ) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်ကတော့ သင့်ရဲ့စိတ်ထဲရှိတဲ့ အပိုင်းတပိုင်းကို ပေးလိုက်တာပေါ့။ ဒီအသုံးကို အပေးခံရတဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့ Someone ဒါမှမဟုတ် Somebody နဲ့ တွဲပြီး To give someone or somebodyapiece of your mind လို့ ဖြည့်စွက်ပြောလို့ ရပါတယ်။ အီဒီယံသွယ်ဝိုက် အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဒေါသထွက်လို့၊ မကျေနပ်လို့၊ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှိတာ၊ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို တဘက်လူသိအောင်ထုတ်ပြောလိုက်တာ၊ ဆူလိုက်တာမျိုးကို ဆိုလိုပါတယ်။ ဘန်းစကားအရတော့ ရန်တွေ့လိုက်တာ၊ စွာထည့်လိုက်တာ၊ ပြောထည့်၊နှက်ထည့်လိုက်တာမျိုးနဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါ။
John is always late for work ! I’m going to give himapiece of my mind.
John က အလုပ်ကို အမြဲတမ်း နောက်ကျတယ်။ ကျနော်တော့ သူကို ပြောထည့်ပစ်လိုက်တော့မယ်။
(၃) All in one piece
All (အားလုံး)၊ in (အထဲမှာ)၊ one (တခု)၊ piece (အပိုင်းတပိုင်း၊ အရာတခု) ဆိုတော့ စကားစုတခုလုံးရဲ့  တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က အားလုံးတခုထဲမှာ ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အီဒီယံအဓိပ္ပါယ်ကတော့ အန္တရာယ်တခုခုနဲ့ ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ရပေမယ့် လူဆိုရင် ဘာမှထိခိုက်မှု မရှိတာ၊ ဒဏ်ရာမရတာ၊ ကျိုးတာပဲ့တာမျိုးမဖြစ်တာကိုဆိုလိုပါတယ်။ လူတင်မကပါဘူး။ ပစ္စည်းဆိုရင်လဲ ဘာမှမဖြစ်တာ၊ မကျိုးမပဲ့တာ၊ အကောင်းပကတိ ရှိတာမျိုးကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအသုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဥပမာကို လေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။
The package slipped from her hands. But thank goodness the vase inside is all in one piece !
အထုပ်က သူ့လက်ထဲကနေလွတ်ကျသွားခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့တော်ပါသေးရဲ့ ၊ အထဲမှာရှိတဲ့ ပန်းအိုးက ဘာမှ မဖြစ်သွားဘူး။
ဒီသတင်းပတ်တင်ပြပေးခဲ့တဲ့ Piece စကားလုံးကိုအခြေခံတဲ့ Idiom အသုံးအနှုန်းတွေက Museum piece, Giveapiece of your mind နဲ့ All in one piece တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။